मलाई किन झुक्याए : प्रधानमन्त्री ओली – SagunKhabar
मलाई किन झुक्याए : प्रधानमन्त्री ओली
By sagunkhabar On Apr 9, 2019
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनी उद्योगीले आफूलाई झुक्याएको बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)को १६ साधारण सभाको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्र जिम्मेबार र जवाफदेही हुने पर्ने बताए।
चिनी उद्योगीको आग्रहलाई स्वीकार गर्दा धोका पाएको ओलीको भनाई थियो। पाकिस्तानबाट अत्यधिक सस्तो चिनी आएर स्वदेशी चिनी बिक्री नभएको गुनासो गरेपछि चिनी आयात रोक्दा उद्योगीले चिनीको मूल्य वढाएको ओलीले बताए।
‘पाकिस्तानबाट धेरै चिनी आएर समस्या पर्यो भन्नुभयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘६३ रुपैयाँमा चिनी बिकेन। ५३–५४ रुपैयाँमा बेच्न बाध्य भयौँ भनेपछि आयात रोक्यौँ। तर आयात रोकपछि चिनीको मूल्य ८५ रुपैयाँ हुँदै एक सय पाँच रुपैयाँसम्म पुर्याएछन्।’ उनले भने, ‘यस्तो व्यापार, व्यापार होइन। ठगीका क्रियाकलाप रोक्नुपर्छ।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
भगवान गणेशलाई चढाउने दुबोका अद्भूत फाइदा, सुनेर चकित पर्नुहुनेछ
यस्ता हुन्छन् मकर राशिका व्यक्ति, तपाईको स्वभाव कस्तो ?
बुटवलमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कालोझण्डा, प्रहरीले नसमातेपछि ओलीले भने – के हेरेर बसेको…
हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा हुने संघर्षमा उत्रन राप्रपाको अपिल
मोदीलाई जिताउँदा बलिउड हार्ने हो कि !
झन् बढ्यो ओली सरकार आएपछि बलात्कार र अपराध